Xildhibaan xisbiga SD oo baaritaan dacwad lagu bilaabayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Thoralf Alfsson, xildhibaan xisbiga SD
Xildhibaan xisbiga SD oo baaritaan dacwad lagu bilaabayo
La daabacay tisdag 19 november 2013 kl 12.20
Baaritaan hordhac ah ayaa lagu talajira in lagu bilaabo xildhibaanka Thoralf Alfsson, oo baarlamaanka u fadhiya xisbiga Sverigedemokraterna, iyadoo lagu soo oogey dacwad ku saabsan in uu galay fal ah dad-nacayb.
Waxay ahayd sanandkaan bartamihiisii kolkii uu Alfsson boggiisa internet ku qoray in soomaalida sharciga Iswiidhen laga siiyo ay keento in lacagaha laga diro Iswiidhen oo loo diro Al Shabaab ay kordhaan.
Ururka sharciga kula dagaalama ururada xagjirka ah oo lagu magacaabo Juridikfronten ayaa qoraalkaan ku ashtakeeyey boliiska.
Dayrtii la soo dhaafay ayuu xafiiska xeerilaaliyaha ee Kalmar go’aan ku gaaray in aan wax baaritaan ah la bilaabin, balse markii ururka Juridikfronten uu codsaday in arrinta dib loo eego ayuu xeerilaaliyaha sare go’aamiyey in arrinta lagu sameeyo baaritaan hordhac ah. Xeerilaaliyuhu wuxuu go’aankiisa ku qoray in oraahda bogga internet ku qorneyd aysan ahayn mid abuureysa ”jawi doodeed oo ku salaysan xaqiiqo iyo wax kalsooni keeni kara balse ay ahayd oraah aan qotadheereyn oo dad bulshada ka mid ah loogu geystey sharaf-dil aan sabab la’aan ah ".